Madaxweynaha Jubba oo ka war-bixiyey heshiiskii Ethopia iyo qorshaha maamulka (Dhegeyso) – Radio Daljir
Seteembar 4, 2013 9:55 b 0
Kismaayo, September 4, 2013 – Madaxweynaha maamulka KMG ah ee Jubba Axmed Maxamed Islaan (Madoobe) ayaa maanta shir jaraa?id oo ku qabtay Baydhabo, wuxuu kaga war-bixiyey heshiiskii Ethopia iyo qorshaha cusub ee maamulka Jubba.
Wuxuu guul ku tilmaamay heshiiskii ay dhowaan la galeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, isagoo intaas ku daray, ?in kadib is afgarad badan iyo isu tanaasul dheeraad ah ay ku yimaadeen qoddobada lagu heshiiyey ee labbada dhinac.
Docda kale madaxweynaha Jubba wuxuu sheegay in dhowaan ay dhici doonaan shirar kale oo dhexmaraya dowladda dhexe iyo maamulka Jubba, kuwaas oo ka kala dhacaya Kismaayo iyo Muqdisho, Axmed Madoobe ayaa sidoo kale u mahadceliyey Madaxweynaha Soomaaliya Xasan sheikh iyo dowladda Ethopia oo qabatay shirka dib-u-heshiisiinta ah.
Madaxweynaha ayaa sheegay in aysan wax macno ah soo kordhinayn is bedelka lagu sameeyey magacii Jubbaland iyadoo haatan laga dhigay maamulka Jubba, wuxuu sheegay in uu dhowaan booqan doono Muqdisho, isagoo Madaxweyne Xasan sheikh isna ugu baaqay in uu yimaado Kismaayo.
Dhegeyso: Shir jaraa?id oo Madaxweyne Axmed Madoobe ku qabtay Kismaayo